एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र नेशनल हाइड्रोको सेयर कारोबारमा रोक,कारण के ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बजार > एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र नेशनल हाइड्रोको सेयर कारोबारमा रोक,कारण के ?
काठमाडौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्का गरेको छ । गोप्य सूचनाहरु जस्तै बोनस, हकप्रद र साधारण सभा सम्बन्धि जानकारीहरु सार्वजनिक हुनु पहिले चुहावट भएको भन्दै बोर्डले अनुसन्धानका लागि कारोबार रोक्का गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिए पछि कारोबार बन्द भएको बताईएको छ ।
केही दिन अघि पाँच आर्थिक वर्षको साधारण सभा बोलाएको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २० प्रतिशत बोनस र ६ सय प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव गरेको थियो । सूचना चुहावट भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्का गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्राचार गरेको हो ।
यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर कारोबार पनि रोक्का गरेको छ । बोर्डले नेप्सेलाई हाइड्रो सञ्चालक समितिको आधिकारिकताका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न भन्दै सेयर कारोबार रोक्का गर्न निर्देशन दिएको बताईएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ असार ६
२०७४ असार ६ गते १२:३३ मा प्रकाशित
आईपीओमा ४० गुणाभन्दा बढी आवेदन परेपछि अब के ?
५० प्रतिशत शेयर जनतालार्इ दिइन्छ अब,तर के–को ? जान्नुहोस्
कथा : मलाई बचाएर आएको काले आफै कसरी मृत्युको मुखमा पुग्यो
धुलिखेलबाट पाँच जुवाडे पक्राउ, ९३ हजार र १० थान तासबुक बरामद